ဘဝ Reader ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဘဝ Reader ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
မပြတ်မတောက်အဘိဥာဏ်ဖတ်ဘို့ထုံးစံအလိုအလျောက် Refill parameters တွေကိုတက် Set
သင်ပထမဦးဆုံး 19 မိနစ်သာ $ .10 တစ်မိနစ်၏နိဒါန်းကမ်းလှမ်းမှုကို
သငျသညျသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအကြံပေးကို select ကိုကူညီအသေးစိတ်အဘိဥာဏ် profile များကို
LifeReader 2008 ကတည်းကအဘိဥာဏ်န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထားပြီး
တစ်ဦးစာဖတ်ခြင်းနှင့်အတူမကျေနပ်လျှင် website တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဘယ်သူမျှမကအာမခံချက်
LifeReader စမ်းသပ်မှုဖတ်နှင့်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများအပါအဝင်အလွန်အလေးအနက်ထားအလားအလာအကြားအမြင်အဘို့မိမိတို့စိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြာပါသည်။ ဒါဟာလျော့နည်းအတွေ့အကြုံရှိအကြံပေးများနှင့်လိမ်လည်မှုအနုပညာရှင်တွေထွက် weeded ဖြစ်ကြောင်းသေချာ, ဒါမှသာအကောင်းဆုံးဖြတ်ပါစေ။
သူတို့ရဲ့ filtering ကို search engine ကိုသာစျေးနှုန်းကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် site ကိုမှအသစ်ဖြစ်ကြသောသူတို့သည်ရှာဖွေရေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ရွေးချယ်မှုများအတွက်အတန်ငယ်ကန့်သတ်သည်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီအဘိဥာဏ် profile များကိုအဆိုပါအဘိဥာဏ်၎င်းတို့၏စာမျက်နှာထဲသို့သွင်းထားလိုက်ပါတယ်ဘယ်လောက်အလုပ်ပေါ် မူတည်. များစွာသောအဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များထက် In-depth ကိုအများကြီးပိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုမချခင်ကတခြား client များနှင့်အတူလုပ်ဆောင်မည်သို့စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်အကြံပေးရဲ့တုံ့ပြန်ချက် Browse ။
LifeReader အကြားအမြင်အချို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များထက်နည်းနည်းပိုပြီးအားသွင်းပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီစေ့စေ့စပ်စပ်စိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ပြီးနှင့်ဖွယ်ရှိအလွန်အတွေ့အကြုံရှိအကြံပေးကြသည်ပါပြီ။ တနည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုသင်တို့အဘို့အပေးဆောင်သောအရာကိုရ, ဒါမှမဟုတ်သင်ဤအမှု၌သင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်အနည်းငယ်မျှသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအဘိဥာဏ်အကြံပေးစမ်းနိုင်အောင်သင်, သာ $ .10 တစ်မိနစ်အဘို့သင့်ကိုပထမဆုံး 19 မိနစ်ရတဲ့များစွာသောနိဒါန်းကမ်းလှမ်းမှု၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျသူတို့န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ဘယ်လိုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဦးစားပေးအပေါ် မူတည်. , ဖုန်း, စကားပြောခန်း, သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်တစ်ဦးအဘိဥာဏ်အကြံပေးနှငျ့ဆကျသှယျနိုငျသညျ။ သင်ပင်မဟုတ်ဘဲအခွင့်အလမ်းဖြင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအဘိဥာဏ်ဖမ်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းထက်, ကြိုတင်မဲအတွက်ဖုန်းခေါ်များအတွက်အချိန်စာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသူတို့အာမခံချက်မူဝါဒ၏အချို့မျိုးပူဇော်ကြဘူး, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့ website တွင်ဖော်ပြထားတဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်း, သူတို့ကငှားရမ်းသည့်အကြားအမြင်ပြအကြောင်းကိုတဲ့ website တွင်ဒီတော့သတိထားပါနည်းနည်းအံ့သြစရာပါပဲ။ သငျသညျအတွေ့အကြုံရှိအဘိဥာဏ်အကြံပေးတစ်ဦးရေကူးကန်ထဲကနေရွေးချယ်တဲ့အခါအလွန်ကြီးစွာသောစာဖတ်ရတဲ့တစ်အများကြီးပိုကောင်းခွင့်အလမ်းရှိသည်နေစဉ်, တစ်ခါတစ်ရံသင်ရုံတစ်အထူးသဖြင့်အဘိဥာဏ်နှင့်အတူမချိတ်ဆက်ဘူး။ ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်အကြွေးရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးကအာမခံချက်ဤသည်အလွန်လေးစားဖွယ်အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကြီးမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါလိမ့်မယ်။
နှင့် LifeReaderသငျသညျအခြို့သောအဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များထက်အနည်းငယ်ပိုပေးဆောင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင် site ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဆိုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဘိဥာဏ်အစွမ်းအဘို့နှင့်မည်သည့်ရာဇဝတ်နောက်ခံဘို့နှစ်ခုလုံးကိုပြထားပြီးစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်အဘိဥာဏ်လေးနက်ကိစ္စအဖြစ်လမ်းညွှန်မှုနှင့်မပျော်စရာအဘို့ပြုမှရီစရာပဲတစ်ခုခုချဉ်းကပ်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, အနည်းငယ်ပိုပေးဆောင်ဖို့ကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။